Samy manana ny fijeriny fa aza lotoina ny anarany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mompera Rémy RALIBERA : Zézoita nafana vay
10 octobre 2014, 06:46
Aza mihevitra « Ny antitra » ho nilaozan’ny toetr’andro ianao. Ny vatana no ohatra ny osaosa fa ny saina mbola mety tsara. Ohatra ny vao omaly no niresahako toa hanihany tamin’i Mompera toy izany. Naman’ny olona rehetra izy. Tsy misoritra eny aminy ny fahalainana hiresaka. Mbola tadidiko ilay hoe: ” ‘Ndao àry ho eny Andohalo isika raha hiresaka”. Resaka inona moa? Gazety, politika, fiangonana. Tsy nahatsiaro andro ho hariva. Izay ilay Mompéra zézoita nafana vay.
Mpanao gazety, mpanao fandalinana manaraka ny vanim-potoana, nandritra ny taona maro (tsy efa ho 30 taona?) nifandimby tao amin’ny Gazety Lakroàn’ i Madagasikara izy. Iza koa moa no tsy hahatadidy ny feony sy ny endriny raha mbola olom-pirenenana mpanaraka ny fivoarana ara-politika teto? Ohatra ny hanihany no niresahany tamin’io takariva io hoe: Naman’Ingahibekely angaha ianao? Tsy fantatro akory ny tena dikan’ilay “Ingahibekely “ raha tsy elaela. Dia nihomehezany aho fa manafina foto-kevitra. Mahitsy i Mompéra rehefa miresaka kanefa mitandrina fatratra mba tsy hiteniteny foana sy hivatravatra amin’ny tsy antony. Mpandalina ny fiainam-pirenena sy nandray anjara lehibe tamin’ny asa fanaovan-gazety. Asa na noho izany no nahavoafidy azy ho Filohan’ny holafitry ny mpanao Gazety in-droa misesy? Nampianatra teny amin’ny Onivérsité-n’Antananarivo koa izy tao amin’ny « école de journalisme ».
Tao amin’ireo sekoly katolika hatrany izy no nandrato fianarana, niantomboka tao amin-dry Fréra teo Andohalo, nandalo tao amin’ny Kolejy Masina Misely Amparibe, ary tonga tany amin’ny Oniversité Grégoriana tao Rôma. Nanaraka ny zotra-piofanana sy fianaran’ny Zézoita rehetra izy : noviciat, juvénat, philosophie. Efa fony kely i Mompera no mpamaky ny asa soratry ny mpandalina sy mpanao famakafakana politika marobe. Anisan’ny famakiny dia izay nosoratan’ny rainy Albert RALIBERA, izay mpanao gazety tao amin’ny lakroan’i Madadagasikara ihany koa nandritra ny 18 taona. Tao aorian’ny fiverenan’i Mompera avy tany am-pitandranomasina tamin’ny taona 1961 dia tafaroboka tao amin’ny tontolon’ny seraseara ny tenany. Izy no niandraikitra ny fandaharan’ny finoana Katolika tao amin’ny Radiom-pirenena, ary tamin’ny taona 1966 no nanombohany tao amin’ny Lakroàn’ i Madagasikara. Ny asa fanaovan-gazety taminy dia talenta nomen’Andriamanitra azy, araka ny naverimberiny matetika. Tsy nanana fotoana nianarana izany manokana izy saingy nankafy boky aman-gazety nandritra ny fiainany. “Nanao politika hatrany aho, kanefa tsy mpikambana tamin’ireny antoko politika ireny, ary indrindra tsy nieritreritra haka toerana politika. Ny fanaovana politika dia tsy fitaka sy heloka bevava tsy akory, fa fijery lavitra kokoa sy mahatakatra ny mety hiseho ho amin’ny fitantanana raharaham-panjakana” Toy izany hatrany ny firesak’i Mompéra matetika.
Tanora marobe no namany. Noresahany fa anisan’ireo tanora sy mpitolona nanao ny fihetsiketsehana nandritra ny taona 1972 (niisa 400) nalefa tany Nosilava izy. Ny mompera Zézoita dia tsy nomanina loatra ho mompera hitanatana tanàna, kanefa henjana dia henjana ny resaka ataon’izy ireo mikasika ny fiaraha-monina sy ny fiangonana. Tsy mba nanavaka i Mompera rehefa miresaka amin’ireo tanora fa noraisiny ho namana akaiky izy ireny. Tamin’ny taona 1989 raha nandalo sy nitsidika teto ny Papa Ray Masina Jean Paul II, dia niady fo mafy i Mompera ny hisian’ny tanora hafa finoana handray anjara amin’ny dinidinika nifanaovana tamin’ny Papa Ray Masina. Mahagaga, hoy izy, fa tsy taitra sy tsy voasarika firy eo amin’ny fiangonana sy ny asa fanompoana aterak’izany ny tanora. Tsaroako koa fa kivazivazy nataon’I Mompéra matetika ny hoe: “Saika tsy hifantoka amin’ny Eglizy aho fa efa saika hanao miaramila”. Tiany loatra koa mantsy ny baolina Kitra fony fahatanoràny. Marary mihitsy ny aiko, hoy izy, raha misy ady baolina kitra ka tsy maharaka izany aho, eny na dia hoe amin’ny Téléviziona aza no hanarahana azy.
Tamin’ny désambra 2007, no namoahany ilay boky « autobiographie »-ny. Nandrasan’ny maro fatratra izany boky nosoratany izany, ka tsy nahagaga raha tao anatin’ny iray volana monja dia 900 isa tamin’ireo 3000 natonta no lafo sahady. Tao anatin’ity boky nosoratan’i Mompéra ity no nanaovany famotsipotsirana ny endriky ny fanaovana politika teto amin’ny Nosintsika nandritra ny 50 taona farany. Feno 82 taona izy, ary nodimandry tamin’ny désambra 2008.